पुनस्र्थापना प्रस्ताव : सत्ता लम्ब्याउने खेल
बन्दले जनजीवन प्रभावित »	लोकमानविरुद्धको मुद्दा सरेको सर्‍यै »	एक सय ५७ न्यायाधीशले लिए शपथ »	Wednesday, Jun 19, 2013<	/p>	पुनस्र्थापना प्रस्ताव : सत्ता लम्ब्याउने खेल
TwitterDownload SocButtonsदिलेन्द्रप्रसाद बडू
सत्तारुढ गठबन्धन एफडिआरएले विद्यमान संकट समाधानका लागि फेरि पनि संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको कुरा बाहिर आएको छ । यो उसको पुराना विषयमा कुरा उठाएर सत्ता लम्ब्याउने दाउ मात्र हो । पुराना विषयवस्तु पुनः ब्युँताएर व्यर्थमा समय बिताउने, सत्ता नछाड्ने र जसरी हुन्छ आगामी वैशाखमा गर्ने भनिएको चुनाव बिथोल्ने एकीकृत नेकपा माओवादीको घोषित रणनीतिअनुरूप नै यी कुरा बाहिर आएका हुन् । सत्ताधारी गठबन्धनले सत्ता छोड्न नचाहेको बलियो प्रमाणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । उनीहरूले समयमै निर्वाचन नगर्ने आफ्नो एक मात्र अभिष्ट रणनीति सफल पार्न यो प्रपञ्च रचेका हुन् । नेपाली कांग्रेस र सम्पूर्ण विपक्षीको एक मात्र अपरिवर्तनीय धारणा वर्तमान संकटको निकास ताजा जनादेश मात्र हो । वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने गरी समय तोकिएको छ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया र चुनावका लागि चाहिने सम्पूर्ण कानुनी, संवैधानिक, भौतिक साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आगामी वैशाख वा जेठदेखि उता कुनै पनि हालतमा चुनाव सार्न हुँदैन । तोकिएकै समयमा चुनाव सम्पन्न गर्ने तरिकाले कांग्रेस अघि बढ्छ । संविधानसभा चुनाव केन्दि्रत कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा कांग्रेस लागेको छ । चुनावलाई पाखा लगाउने कुत्सित मनसायबाट यो वा त्यो बहाना अघि सार्नु भनेको नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको गन्तव्यलाई पूर्णता नदिने खेल मात्र हो । सत्तारुढ गठबन्धन ताजा जनादेशको विपरीत दिशातिर जान खोजिरहेको छ । पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्नुको उद्देश्य अहिलेको सत्ता लम्ब्याउने चाल मात्र हो । जसरी भए पनि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । कांग्रेसको अपरिवर्तनीय दृष्टिकोण त्यही हो । ताजा जनादेशमा जानका लागि कांग्रेसले वार्ता र संवादबाट सत्तारुढ दलहरूलाई दबाब दिन्छ । यो प्रक्रिया हामीले छोडिसकेका छैनौँ । यसबाट निकास ननिस्कने भएपछि मात्र हामी जनतालाई जागरुक गर्दै जनदबाब सिर्जना गर्छौं । र, यो षड्यन्त्रको चिरफार गर्छौं । ताजा जनादेशबाट मुलुकमा देखिएका विद्यमान संकट अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ । वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न विशेषतः माओवादी चाहिरहेका छैनन् । जसले हामीलाई जनतासामु जान बाध्य बनाएको छ । संकटको निकासका लागि चुनाव सुनिश्चित गर्न हामी चाहन्छौँ । मुलुकको लोकतन्त्र र कमजोर हुँदै गएको राष्ट्रियता बचाउनका लागि आन्दोलन अपरिहार्य बनेको छ । त्यसका लागि हामी सडकमा जान्छौँ । सडकबाट यो असंवैधानिक सरकार विस्थापित हुन्छ । संकट समाधानका लागि राष्ट्रय सहमतिको सरकार निर्माण हुन्छ । मुलुकको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउनका निमित्त बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हँुदै छ । हामी यसका निमित्त सडकमा जान लागेका हौँ । लोकतन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर बनेकाले त्यसलाई मजबुत बनाउन सडकको बाटो तताउनुपरेको हो । १४ जेठदेखि नै हामीले भन्दै आएको सहमति सत्ता नछाड्ने सत्ताधारी दलहरूको रबैयाका कारण हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो उद्देश्य के हो भने दलहरूबीच मुठभेडको अवस्था सिर्जना नहोस् । दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकता नटुटोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले वार्ता र संवादलाई चटक्कै छोड्न सकेका छैनौँ । अहिलेको आवश्यकता सबै दलबीचको सहमति, सहकार्य र एकता नै हो । त्यसलाई हामीले छोडेका छैनौँ । तर, सत्ता नछाड्ने नियतले संविधानसभा भंग गरिएको हो भन्ने सत्तारुढ दलहरूको मनसाय देखिन्छ । त्यो अहिले प्रमाणित हुँदै आएको छ । त्यसैले हामी सडकमा जान बाध्य भएका हौँ । अब हामी ताजा जनादेशमा जानका लागि सत्तारुढ गठबन्धनलाई बाध्य पारेरै छाड्छौँ । जनताको बलमा मात्र यिनीहरू विस्थापित हुन्छन् र मुलुकलाई निकास दिने ताजा जनादेशको बाटो तय हुन्छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफू भारत भ्रमणमा जानुअघि संविधानसभाका विघटित सम्पूर्ण दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर भारतबाट र्फकने समयसम्म विद्यमान संकट समाधानका लागि सहमति गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । यो राष्ट्रप्रमुख र संविधानको संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिको सदिच्छा हो । मुलुकमा सहमति र सहकार्यसाथ नेपालको अन्तरिम संविधानको स्पिरिटअनुरूप संकटको निकास निस्कियोस् भन्ने उहाँको सदिच्छालाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यसैलाई मानेर असंवैधानिक सरकारविरुद्ध हामीले घोषणा गरेको आन्दोलन पनि रोकेर वार्ता र सहमतिको प्रयास तीव्र पारेका हौँ । सहमति र सहकार्यसाथ अघि बढ्न हामी उहाँको सदाशयताको पछि लाग्यौँ पनि । उहाँको त्यस कदमलाई हामीले सघायौँ पनि । सहमतिको सरकार बनाएर ताजा जनादेशमा गइहाल्नुपर्छ । यसका निमित्त उहाँको प्रयास जारी छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिज्यूले सबै पार्टीका शीर्ष नेतालाई बोलाएर द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा छलफल चलाइराख्नुभएको छ । पछिल्लो समय यसअघिका प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएका सम्पूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व लिएर त्यसलाई सहजतासाथ सफल बनाएको पार्टी कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका उल्लेखनीय हुन सकेन भन्ने आरोप लागेको थियो । त्यसलाई हामीले गलत साबित गरिदिएका छौँ । हाम्रो पार्टीको आदर्श, मूल्य र मान्यतालाई त्यागेर सरकारको नेतृत्वको लोभ गरेका छैनौँ । त्यसका साथै पार्टीमा गुटबन्दी छ भन्ने पनि आरोप कांग्रेसलाई लागेको थियो । पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टीभित्र समग्र एकता छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन् । कांग्रेसलाई नेतृत्व दिउ“m भन्यो भने प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीभित्रै विवाद छ भन्ने मिथ्या आरोप लाग्ने गरेको थियो । त्यो आरोप चिर्न हामी सफल भएका छौँ । सर्वसम्मत रूपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई चयन गरेका छौँ । राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो उल्लेखनीय नेतृत्वदायी भूमिकाले नै ०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएको थियो । त्यो छाप हामीले अहिले पनि जनताबाट गिर्न दिएका छैनौँ । त्यो आन्दोलनलाई हामीले सहमति र सहकार्यबाट सम्पूर्ण पार्टीलाई एक स्थानमा ल्याएर दुई सय ४० वर्षसम्म आफ्नो एकछत्र राज गरेको राजसंस्थालाई घँुडा टेकाएका थियौँ । सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई अहिलेसम्म हामीले त्यागिसकेका छैनौँ । त्यसैअनुरूप अघि बढ्न प्रयासरत छौँ । सहमति र सहकार्यको नेतृत्व अहिले पनि कांग्रेसले गरिरहेको छ, भोलि पनि कांग्रेसले नै गर्नेछ । यसमा कसैको दुई मत छैन । यसमा कसैले आशंका गर्छ भने त्यो निराधार हो । यी कुरालाई अहिलेसम्म हामीले पुष्टि गर्दै आएका छौँ, त्यसलाई व्यवहारले देखाएको छ । आगामी दिनमा पनि त्यस्तै गर्ने प्रवक्ताको हैसियतमा मेरो प्रतिबद्धता छ ।
(कांग्रेस प्रवक्ता बडूसँगको कुराकानीमा आधारित)
Prajtantra ko naau ma Loktantra lai nimto dieara Rajnitik Partyharule Nepali samaj lai bhakundo kheli rahechan. Maobadile ta manche nai maryo.
Yo sansar ko kunaipani deshma kaam pura gare bapat haatma talab wa paisa thapincha. Charbarsa bhitra Deshko Dhukuti bata savidhan lekhne naauma6arab bhanda badhi 601 janale haatma thape. Kaam pura huna sakena. Yesratha, Rs6arab Rastra ko Dhukutima pahila dakhila garnu. Yesbata Kohipani phutkina paudaina. Tespachi Nepali Samajle nirnaea garne chha.